KIDULTHOOD: အမှန်တကယ်လူငယ်တွေကိုအရေးကြီး - Element ကို Society က
ဒြပ်စင် Society က
အဆိုပါ Element ကိုအဖွဲ့ကို Join
ရှက်ဖီးလူငယ် Charities မြေပုံ
NCS များအတွက် Up ကို Sign
ယခုပင်လျှင် Up ကိုလက်မှတ်ထိုး?
မတ်လ 19, 2018
အများကြီးဗြိတိသျှမီဒီယာများကခြံ, ကယ့်ကိုသူတို့အဖို့အရေးပါအဘယ်အရာကိုထွက်ရှာတွေ့မှ '' ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ဆယ်ကျော်သက် '' နှင့်ပတ်သက်ပြီးအဆိုပါဒဏ္ဍာရီဖယျရှားဖို့အချိန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့တစ်တွေရလဒ်အဖြစ်လုပ်နေတာပါပဲ။ စကားပြောဆိုမှုအတွက်ဗြိတိန်ရဲ့အမျိုးသားရေးလူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်အစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားနိုင်ငံသားဝန်ဆောင်မှု (NCS) ၏တစ်နှစ်တာ 12 ဘွဲ့ရတစ်ဦး panel ကို join ။ ဝိသေသလက္ခဏာ, အသိုင်းအဝိုင်း, အိပ်မက်နှင့်မျှော်မှန်းချက်, မီဒီယာ, သြဇာ, လွတ်လပ်မှုနှင့်ပုန်ကန်မှုဖြတ်ပြီးအထိသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့၏အတွေးများကိုနားထောင်ကြလော့။
ဒြပ်စင်စေတနာ့ဝန်ထမ်း Cheyenne အဘိဓါန်ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 22, 2018 ပေါ်မှလူငယ်စျေးကွက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ NCST ကိုထောကျပံ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Cheyenne အဘိဓါန်ဒီဇင်ဘာညီလာခံမှာဖြန့်ချိသည့် NCS လူငယ်အစီရင်ခံစာအတွက်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်တစ်ဦးအဖြစ် featured ။ Cheyenne အဘိဓါန်လန်ဒန်မြို့ရှိလာမယ့်သီတင်းပတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်မှာအနည်းငယ်သည်အခြား NCS Grads နှင့်ဘွဲ့လွန် Manager ကိုဂျိမ်း Canvin အတူ panel ကိုပေါ်မှာထိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ငါကိုလက်ခံ ကိုယ္ေရးအခ်က္ လံုျခံဳမွု ေပၚလစီ *
NCS ဘွဲ့လွန်အခွင့်အလမ်းများ - ပါဝင်ပတ်သက်ရရန်ဤ Read!
နွေရာသီ 2018 WAVE က 3
နွေရာသီ 2018 WAVE က 2
NCS ရှက်ဖီး 2018 ကျောင်းဆင်းပွဲပါတီ
© 2019 All rights reserved ။